Igwe nkpuchi ihe ntinye maka ntinye akara nke aluminom
Home / Itinye n'ọkwa akara igwe / ntinye akara nkpuchi nke mpempe akwụkwọ aluminom
Category: Itinye n'ọkwa akara igwe Tags: aluminom nwere ike ịkụnye ihe eji ekpuchi, aluminum foil itinye n'ọkwa sealer, aluminom foil induction akara, aluminum foil sealer, aluminum foil akara igwe, zụta ihe mkpuchi ọkụ, okpu sealer igwe, okpu akara igwe, foil akara igwe, induction okpu sealer, igwe mkpuchi ihe mkpuchi, induction sealer, Ọnụ mmịnye ọkụ, induction akara, igwe mkpuchi ihe mkpuchi, igwe akàrà
Ngwunye akara ntinye maka aluminom
Kedu ihe bụ akara ntinye?
Itinye n'ọkwa bụ usoro na-enweghị kọntaktị nke ihe ejikọtara site na thermoplastics site na ntinye electromagnetic nke na-ewepụta mmiri eddy iji kpoo ihe ndị ahụ ọkụ. Na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, a na-eji usoro a ejiri hermetically mechie okpu akpa nke nwere okpomọkụ site na okpomọkụ. N'ihe banyere anyị Aluminom Foil Induction Sealer Equipment, laminate foil bụ ihe mkpuchi ọkụ nke aluminium.
Product ihe Igwe anaghị agba nchara
Akara dayameta 50-120mm
Ọsọ akara 20-50 karama / min
Nyefee ọsọ 0-12.5m / min
Oru akara 20-280mm
Max Ike 1800W
ọsọ ọsọ voltaji Otu oge, 220V, 50Hz
Ngwa ọdabara Plastic kalama ọnụ aluminum foil film
Dimension (L * W * H): 1005 * 440 * 390mm
Gini bu ihe eji eme ihe nke aluminium nke nwere ike inweta igwe?
Kemgbe ihe aluminum foil itinye n'ọkwa akara igwe eji ya na akara akpa iji akwukwo aluminium, ufodu na-akpokwa ha dika:
Aluminom nwere ike ịkụzi igwe / akụrụngwa
Aluminium sealer igwe / akụrụngwa
Aluminom nwere ike ikuku igwe / akụrụngwa
A na-eji igwe ndị a na-etinye ihe eji akpachi anya na iko plastik site na akara ntanye iji gbatịkwuo ndụ ngwaahịa, gbochie ọnyà mmiri, na ọkachasị iji nye akara akara ngosi. Aluminom foil induction can seamer machines are in electrically powered, handheld, na ntuziaka aghụghọ maka akara dị iche iche mmechi nha.
Kedu ihe bụ Aluminom Okpomọkụ Induction Liner?
Hụla ihe ndị a na-ekpuchi karama na ite dị iche iche mgbe ị mepee ngwaahịa agbakọtara dị ka butter na mmiri ọgwụ. Ngwongwo nke itinye oku nke aluminium bu nkpuru ọla ọcha na oghere nke akpa nke gosiputara na ngwugwu a kpochapuru. Ha choro ntinye nke aluminium nwere ike imechi akụrụngwa iji mechie akara ndị a n'ụzọ dị mma.
Ọzọkwa, ụdị ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ime okpu bụ akara nwere ọtụtụ mkpuchi nke mejupụtara usoro ndị a na usoro dị iche iche:
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ pulp
Otu akwa oyi akwa
Otu aluminom foil oyi akwa
Ihe mkpuchi polymer
Ihe nkpuchi kachasị elu, nke bụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, akwụ akwụ megide akụkụ mkpuchi ahụ wee nwee ntụpọ na ya. Ihe na-esochi ya bụ akwa nke wax iji kee akwa mpempe akwụkwọ pulp na akwa nke atọ, aluminium alumini, nke bụ akwa nke na-agbaso ihe ahụ. Ihe ikpeazụ dị na ala bụ polymer oyi akwa nke dị ka ihe nkiri plastik.
Ngwurugwu anọ a na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nweta ihe dị mkpa maka usoro ntinye nke ọma iji mepụta akara ikuku.
Itinye n'ọkwa akara Ngwa
HLQ aluminum foil itinye n'ọkwa akara igwe n'ihi na ihe mkpuchi dị mma maka ịdechi nri, ihe ọveraụ ,ụ, ngwaahịa ọgwụ, na ihe ịchọ mma n'etiti ndị ọzọ n'ụdị kalama dị iche iche, dịka karama na okirikiri, nke e ji plastik mee.
Ọzọkwa, n'okpuru bụ ụlọ ọrụ na ngwaahịa dị iche iche nke LPE nwere ike ịnya igwe nwere ike ijikwa.
Ụlọ Ọrụ Na-aṅụ Mmanya, biya mkpọ, Soda, mmiri, Cider, ihe ọiceụiceụ, kọfị na tii, ihe ọveraụ Carụ na-egbu egbu
Food Mmeputa Anụ, azụ, ahịhịa, mkpụrụ osisi, ihendori, jam, tuna, ofe, afọ, mmanụ aeyụ, nri na-edozi ahụ, nri kpọrọ nkụ (dịka mkpụrụ, ọka, osikapa, wdg)
Industrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ Veterinary onunu, Medical onunu, ntụ ntụ, ọgwụ, Pharmaceutical ngwaọrụ
Industrylọ ọrụ kemịkal Mmanụ na-esi nri, mmanụ Lube, mama, agba, kemịkalụ ihe ọkụkụ, mmiri nhicha, ink na lacquers, mkpofu nuklia na ihe ndị na-eme redio, akpịrị akpaka (mmanụ ala, mmanụ na mmanụ dizel)
Olee otu aluminom foil induction sealing machine work
Usoro ntinye nke ntanye ihe na-amalite site n'inye ihe ndi juputara na ngwongwo na ngwongwo nke alumini nwere ike igba igwe. Ihe nkpuchi ahụ etinyelarị eriri ntinye nke aluminom tinye n'ime ya tupu etinye ya na akpa.
Ngwakọta ihe mkpuchi okpu na-agabiga n'okpuru isi nke seamer, nke na-ewepụta ala electromagnetic oscillating, site na onye na-ebugharị ebugharị. Ka karama ahụ na-agafe n'okpuru onye na-ahụ maka ihe ọkụkụ, ihe nkedo ọkụ nke aluminium na-amalite ikpo ọkụ n'ihi oke mmiri. Ngwurugwu wax, nke bụ akwa nke abụọ nke ihe ntinye, na-agbaze ma na-etinye ya site na akwa kachasị elu - akwụkwọ akwa pulp.
Mgbe akwa wax na-agbaze kpamkpam, a na-ewepụta akwa nke atọ (aluminom foil layer) site na mkpuchi. Ihe mkpuchi nke ikpeazụ, akwa polymer, na-ekpo ọkụ ma na-agbaze na egbugbere ọnụ plastik. Ozugbo polima ahụ jụrụ, njikọ ahụ e mepụtara n'etiti polymer na akpa na-emepụta ngwaahịa a na-emechi hermetically.
Usoro nsacha niile anaghị emetụta ngwaahịa ahụ n'ime akpa ahụ. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume maka ikpo oke ọkụ na-eme nke na-akpata mbibi nke akara nke akara ahụ na-akpata akara akara. Iji zere nke a, LPE na-arụ ọrụ nyocha nke ọma site na usoro nrụpụta niile nke ntinye aha gị nke aluminom nwere ike ịkọ akụrụngwa.
Tupu n'ichepụta usoro, anyị na-eme ọtụtụ ịkpọtụrụ gị iji ghọta nke ọma mkpa gị. Nke a na - enyere aka ịchọpụta sistemụ kwesịrị ekwesị iji jikwaa ngwaahịa akọwapụtara dịka igwe eji achọ igwe maka akara nkwakọ ngwaahịa echekwara.
Aluminium Foil Sealer Na itinye n'ọkwa
Ngwunye Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Ngwá Agha
Ngwongwo Ngwunye Ngwunye Nwucha
Induction Harding Steel Pipe Mkpa
Itinye induction steel waya
itinye n'ọkwa Preheating aluminum flanges